AMK Creation » AMKနှင့် “သက်တံဆယ်စင်း”
လရိပ်အိမ် October 5th, 2012 (#)
သက်တံဆယ်စင်းရဲ့ဒီဇိုင်းက ရှင်းလင်းပြီး တော်တော် အတွေးအခေါ်ကောင်းပါတယ်။ သက်တံဆယ်စင်းရဲ့ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့လာမန့်တာပါ။
ကိုမော်ကြီးရဲ့ မိတ်ဆက်နိဒါန်းမှာလဲ မန့်ထားပါတယ်။
မြစ်ကျိုးအင်း October 1st, 2012 (#)
စေတနာပါပါနဲ့ အပင်ပန်းခံ ကျိုးစားပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးအတွက် သိပ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စာအုပ်လေးတွေ လက်ထဲရောက်လာချိန်မှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် လှလှပပလေး မြင်ရတာ ပိုပြီး ဝမ်းသာ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။
(ဘလော့ဂ်တွေနဲ့အဆက်ပြတ်နေလို့ ကွန်မန့်လာရေးမယ်ဆိုပြီး တေးထားရဲ့နဲ့ကို နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ)
ထရီဆာ (Teresa) October 1st, 2012 (#)
စာပေချစ်တတ်သူရဲ့ စေတနာက စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာတင် ထင်ဟပ်နေပါတယ် .. အားပေးနေပါတယ် အကို AMK ..း)
AMK Creation September 29th, 2012 (#)
ကျွန်တော် အွန်လိုင်းကို သိပ်အသုံးမပြုဖြစ်ပါဘူး။ အခုလိုအွန်လိုင်း
ရောက်တုန်း တုန့်ပြန်အားပေးထားတာတွေ ဖတ်လိုက်ရတော့ ၀မ်းသာကြည်နူးမိရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အားထုတ်မှုတွေအပေါ်
ကောင်းသည် ဆိုးသည် ဝေဖန် အကြံပေးသမျှ လေးစားစွာ လက်ခံချင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖန်တီးမှုအသစ်တွေ အတွက်လည်း ဆက်လက်ပြီး ဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။
မောင်ဘကြိုင် September 28th, 2012 (#)
AMK အောင်မြင်ဖို့ ကျွန်တော်ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ် ကိုမော်ကြီးး)
Yan September 27th, 2012 (#)
စိတ်ထဲက ရင်းနှီးနေလို့ ကော်မန့်ကို အေးဆေးနောက်မှရေးမယ်ဆိုပြီး ခဏနှပ်ထားလိုက်တာ ကျွန်တော် ကိုမော်ကြီးကို လျစ်လျူရှုလိုက်သလို ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်.
ဒီစာအုပ်လေးကို ကိုယ်ပိုင် စာအုပ်လေးသဖွယ် ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်း စိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီး အပင်ပန်းခံ အကောင်အထည်ဖော်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ကိုမော်ကြီးနဲ့ မမြသွေးနီတို့ကို ကျွန်တော့်ရင်ထဲ အမြဲတမ်း မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေပါတယ်.
ဒါကြောင့်လည်း နောက်နောင် ကျွန်တော်ဆက်လက်ထုတ်ဝေသွားမယ့် စာအုပ်တွေကို ကိုမော်ကြီးရဲ့ AMK Creation နဲ့ပဲ ဆက်လုပ်ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်သလို ကျွန်တော့်ဆီကို လာမေးမြန်းစုံစမ်းကြတဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဝေချင်သူတွေကိုလည်း AMK ကိုပဲ လွှတ်လိုက်မှာပါ.
(ကော်မရှင်ခတွေတော့ နောက်မှ နားလည်မှုနဲ့ ရှင်းပေးပေါ့ဗျာ.. နော့.း)))
ကျွန်တော် ရန်ကုန်ပြန်လာဖြစ်တဲ့တစ်နေ့ကျရင် ကိုမော်ကြီးတို့မိသားစုနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး တွေ့ဆုံချင်ပါသေးတယ်.
ပျော်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းလေးကို ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ကိုမော်ကြီးနဲ့ မမြသွေးနီတို့ရေ…
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 26th, 2012 (#)
သက်တံ ဆယ်စင်းလေးကို လှလှပပ ပုံဖော်ခြယ်မှုန်းပေးထားတာ စာပေချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ရာမှန်း သိသာလှပါတယ်။
AMK Creation ရော သက်တံဆယ်စင်းလေးရော ထာဝစဉ်ထွန်းလင်းတောက်ပပါစေလို့ ဆုမွန်များစွာဖြင့်…
ဖြိုးဖြိုး September 26th, 2012 (#)
စာတစ်အုပ် ဖြစ်လာပုံကို အသေးစိတ်မြင်လိုက်ရသလို၊ ဖန်တီးသူရဲ့ စေတနာကိုလည်း အထင်းသားမြင်ရတဲ့အတွက် လေးစားမိပါတယ်။
Ambition, Making နဲ့ Knowledge တွေ Good, Perfect, Wide ဆိုတာ ယုံမှားသံသယ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ September 25th, 2012 (#)
ရင်ထဲမှာ ပီတိတွေဖြာနေတော့ပါပဲ ဆရာရေ…
ဒီစာကိုရှဲခွင့်ပြုပါ။ မလေး ဒီဆိုက်ကို ခရက်ဒစ်ပေး၊ လင့်ခ် လုပ်ပါမယ်ရှင်။
မြသွေးနီ September 25th, 2012 (#)
ကိုမော်ကြီးကို ဖုန်းဆက်ပြောပြလိုက်ပါတယ် မလေးရေ…
ခွင့်မပြုနိုင်စရာ မရှိပါဘူးတဲ့၊ ၀မ်းမြောက်စွာ ခွင့်ပြုပါတယ်..
ခွင့်တောင်းတဲ့ မလေးရဲ့စိတ်ကိုလည်း လေးစားမိကြောင်း မလေးကို ပြောခိုင်းပါတယ်…။
အိန်ဂျယ်လှိုင် September 25th, 2012 (#)
တစ်ကယ့်ကိုပဲ ရင်ထဲကစေတနာနဲ့ ..အောင်မြင်စွာ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ သက်တံဆယ်စင်းအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်အကိုရေ…
ချစ်ကြည်အေး September 24th, 2012 (#)
အစ်ကိုမော်ကြီးရင်ထဲက အွန်လိုင်းစာရေးသူတွေအပေါ်ထားတဲ့ နားလည်မှုနဲ့ စာရေးသူချင်းတွေအပေါ်ထားတဲ့ စာနာမှုတွေကို ဒီစာလေးထဲမှာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကျေးဇူးပါအစ်ကိုမော်ကြီးးးး
AMK ဆက်လက် အောင်မြင်ပါစေရှင်….